ब्यानर पोस्ट – Eps Sathi
अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ "A picture is worthathousand words". यो भनाईलाई प्रमाणित गर्ने दक्षिण कोरियाको १ सय बर्ष अगाडीका फोटोहरु आज राख्न गइरहेको छु। यि फोटाहरु सन १८९० देखि १९०३ सम्म कोरिया आएका विदेशी पर्यटकहरुले खिचेका हुन्। कोरियाको बिविधता, दैनिक जीवनका यि फोटाहरुले त्यतिबेलाको कोरियाको जनजिवन कस्तो थियो भन्ने कुराको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। पहिलेका यि फोटाहरु हेर्दा जो कोहि अचम्मित हुने गरेका छन्। अहिले कोरियन मुभि तथा ड्रामामा देखिने मानिसहरु र यि फोटाका मानिसहरु धेरै नै फरक छन्। यि तिनै कोरियनहरु हुन भनेर पत्याउन जो कोहिलाई गाह्रै पर्दछ। १०० बर्षमा धेरै ठूलो परिवर्तन गर्न सकिने रहेछ भन्ने गतिलो सन्देश यि फोटाहरुले दिन सक्दछन्।
दक्षिण कोरियामा यहि फेब्रुअरी २६ तारिखबाट कोरोना बिरुध्दको खोप अभियान सुरु हुँदैछ। खोप अभियान सुरु हुने मिति नजिकिँदै गर्दा अहिले अधिकाँसको ध्यान कसले सुरुमा खोप लगाउन पाउँछ? आफ्नो पालो कहिले आउला? भन्ने कुरामा छ। सेप्टेम्बर महिनासम्म कोरियाको जनसंख्याको करिब ७० प्रतिशत अर्थात करिब करिब ३ करोड ६० लाखलाई कोरोना भाइरस बिरुध्दको खोप लगाइसक्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारले राखेको छ। नोभेम्बरसम्म अधिकांसमा कोरोना बिरुध्द प्रतिरक्षात्मक क्षमता विकास गरिसक्ने गरि तयारी थालिएको छ। खोप अभियानलाई कोरिया सरकाले ४ चरणमा बाँडेको छ। प्राथमिकताका आधारमा कसलाई कहिले खोप लगाउने भनि यो ४ चरण बनाइएको छ। प्रश्न. कसले कोरियामा पहिला कोरोना बिरुध्दको खोप पाउँछ? नर्सिङ होममा रहेका बिरामी, त्यहाँका मेडिकल स्टाफहरु, केयरगिभरहरु जसको उमेर ६५ बर्षभन्दा कम रहेको छ उनिहरुले पहिलो चरणमा एस्ट्राजेनेका कम्पनीले उ
Posted in ब्यानर पोस्ट, सेयर बजार
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड र नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेन्ट्रलाइज्ड एप्लिकेसन फर आस्बा वेस्ड इस्युऐन्स (सी–आस्बा) प्रणाली सिडिएससीको मेरोसेयर वेवसाईट तथा मोबाईल एप्सबाट अहिले प्राथमिक सेयर तथा हकप्रद सेयरको आवेदन घरमै बसि अनलाईन भर्न सहज भएको छ। यसबाट बैंकमा लाइन बसेर आवेदन दिनपर्ने समय बचत भएको छ यसबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवेदन भर्दा फरक फरक शुल्क लिने गरेका छन् । कतिपय बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकलाई सुविधा दिनका लागि तथा बैंकतर्फ आकर्षण बढाउनको लागि निःशुल्क आस्वा सेवा उपलब्ध गराएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरिद सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराएवापत बढीमा १ सय रुपैयाँ लिन पाउने प्रावधान नेपाल धितोपत्र बोर्डले ल्याएको आस्वा निर्देशिकामा रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आस्वा सेवा उपलब्ध गराए वापत लिने सेवा शुल्कमा एकरुपता कायम हुन सकेको छैन। जसका कारण लगानीकर्ता हौरा
Posted in ब्यानर पोस्ट, मनोरंजन, रोचक, समाचार, सेयर बजार
कोरियन एम्बेसीमा डेट बुक कसरी गर्ने
Posted in अन्तर्राष्ट्रिय समाचार, ब्यानर पोस्ट, रोचक, समाचार
कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण केहि महिनादेखि दक्षिण कोरिया जानका लागि भिजा आवेदनको काम पूर्ण रुपमा रोकिएको छ। भिजा आवेदन बाहेकका काम भने अहिले पनि एम्बेसीबाट भइरहेको छ। धेरैजसो बिध्यार्थीहरु एम्बेसी पुग्ने गरेको देखिन्छ। कोरियाका बिश्व बिध्यालयहरुमा उच्च शिक्षाका लागि जानेहरुको संख्या अहिले ह्वात्तै बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ। अन्य देशहरुभन्दा प्रकृया सजिलो, आकर्षक रोजगार, हरेक हिसाबले सुरक्षित देखिएकाले बिध्यार्थीहरुको रोजाईमा अहिले दक्षिण कोरिया परेको हुनसक्छ। कोरियाली बिश्वविध्यालयहरुमा प्रवेश पाउनका लागि नेपालमा पढेको सबै कागजात सम्बन्धित विश्वविध्यालयबाट प्रमाणित गरी अन्तिममा नेपालमा रहेको कोरियन एम्बेसीबाट पनि प्रमाणित गर्नुपर्छ। कोरोना भाइरसका कारण अहिले एम्बेसिमा पहिले नै समय बुक गरेर जानुपर्दछ। यदि समय बुक नगरी जानुभयो भने तपाईले दुख मात्र पाउनुहुनेछ तपाईको काम हुदैन। समय बुक गर